आज अमेरिकी डलरहित ९ देशका बिदेशी मुद्राको भाउ बढ्यो – Life Nepali
आज अमेरिकी डलरहित ९ देशका बिदेशी मुद्राको भाउ बढ्यो
काठमाडौँ । आज असार २५ गते (९ जुलाई, बिहीबार) अमेरिकी डलरहित ९ देशका मुद्राको भाउ बढेको छ । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणको प्रभावका कारण विदेशी मुद्रा र सुन चाँदीको भाउमा भारी उतार चढाब आइरहेका बेला आज बिहीबार धेरै देशका मुद्राको भा बढेको हो । आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ७३ पैसा तथा बिक्रिदर १२० रुपैयाँ ३३ पैसामा झरेको छ।
यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १३५ रुपैयाँ ५ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३५ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ। त्यस्तै, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ८ पैसा र बिक्रिदर १ सय ५० रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ८पैसा रहेको छ। कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ५ रहेको छ।
युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ६० पैसा छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ७६३ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ २ पैसा तथा बिक्रिदर २८ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ। कुवेती दिनार एकको खरिददर ३८८ रुपैयाँ ७४ पैसा तथा बिक्रिदर ३९० रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर ३१७ रुपैयाँ ५५ पैसा तथा बिक्रिदर ३१९ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ। हेर्नुहोस थापा तालिका विवरणमा :
Previous आज फेरि पनि ह्वात्तै बढ्यो सुनको मुल्य ! तोलामा कति पुग्यो ? हेर्नुहोस –
Next सुनको भाउ अहिलेसम्म कै उच्च ! कति पुग्यो ? तोलामा हेर्नुहोस !